काे-काे परे याे साल टाइम वर्ष व्यक्तिकाे मनाेनयनमा ? हेराैं । – Himalaya TV
Home » अन्तर्राष्ट्रिय » काे-काे परे याे साल टाइम वर्ष व्यक्तिकाे मनाेनयनमा ? हेराैं ।
काे-काे परे याे साल टाइम वर्ष व्यक्तिकाे मनाेनयनमा ? हेराैं ।
१९ मंसिर २०७४, मंगलवार १८:२२
काठमाण्डाै, १९ मंसिर । टाइम म्यागेजिनले सन् २०१७ का लागि वर्ष व्यक्तिका १० फाइनलिस्ट मनोनयन गरेको छ। टाइमको सर्टलिस्टमा यसवर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उन पनि सामेल छन्।
यी हुन् टाइम म्यागेजिनको सर्टलिस्टमा पर्न सफल १० व्यक्तित्वहरू :
२०१६ को वर्ष व्यक्ति बनेका ट्रम्पको यो वर्ष पनि विवादास्पद नै रह्याे । ट्रम्पले हेल्थ केयर, आप्रवास, वातवरण, करलगायतका क्षेत्रमा विवादास्पद निर्णयहरू गरे । उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिए, कतारमाथि साउदी अरब नेतृत्वका देशहरूले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन गरे।
ट्रम्पले ‘रकेट म्यान’ संज्ञा दिएका उत्तर कोरियाली नेता किमले यो वर्ष आणविक हतियार प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण सफलता हात पारे। वर्षभरी नै उनले आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानी र निरीक्षणमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहे। सेप्टेम्बरमा किमले हाइड्रोजन बम विस्फोट गराएपछि आणविक युद्धको त्रासमा वृद्धि भएको थियो। यसै साता उत्तर कोरियाले अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सक्ने ह्वसङ–१५ अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ।
साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान पनि यो वर्ष चर्चामा रहे। यी ३२ वर्षीय युवराजले देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई नै भ्रष्टाचार आरोपमा गिरफ्तार गराएका छन्।
अमेरिकन फुटबलका क्वार्टरब्याक केपरनिकले गत वर्ष अश्वेतहरूमाथि प्रहरी बर्बरताको विरोधमा राष्ट्रियगानको समयमा घुँडा टेकेर प्रदर्शन गरेका थिए। यस वर्ष उनी कुनै टोलीमा छैनन् तर उनको शैली फुटबलका अन्य खेलाडीले पछ्याएर विरोध गरिरहेका छन्।
हलिउडका शक्तिशाली निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनको यौन दुर्व्यवहारको खुलासा भएको यो अभियानमा विश्वभरका महिलाहरू सहभागी भए। हलिउडमै दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध आवाज उठे।
ट्रम्प प्रशासनले ओबामा कार्यकालको ‘डिफर्ड एक्सन फर चिल्ड्रेन अराइभल प्रोग्राम’ अन्त्य गर्ने सम्भावनाबीच आप्रवासी आमाबाबुसँग अमेरिका पुगेका हजारौँ कागजातविहीन केटाकेटीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
यो वर्ष टाइम म्यागेजिनले बुधबार वर्ष व्यक्ति घोषणा गर्नेछ।
टाइम म्यागेजिनले सन् १९२७ देखि वर्षको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति, समूह वा विचार छान्दै आएको छ। यसमा लगभग सबै अमेरिकी राष्ट्रपति, एडोल्फ हिटलर, माहात्मा गान्धीलगायतका व्यक्ति परेका छन्। १९८२ मा कम्प्युटरका लागि यसको नाम ‘मेसिन अफ द इयर’ राखिएको थियो। एजेन्सी